Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Cabdi Shide Bile oo Maleeshiyo Beeleed Samaystay, Kuna Duulay Guriga Muumim Gadiid Cumar + Kiiskiisii oo Sii Adkaaday
Cabdi Shide Bile oo Maleeshiyo Beeleed Samaystay, Kuna Duulay Guriga Muumim Gadiid Cumar + Kiiskiisii oo Sii Adkaaday
Apr 22, 2012 SOMALI NEWS Comments Off on Cabdi Shide Bile oo Maleeshiyo Beeleed Samaystay, Kuna Duulay Guriga Muumim Gadiid Cumar + Kiiskiisii oo Sii Adkaaday
Maleeshiyo beeleed uu samaystay maayarkii hore ee degmada Boorama Cabdi Shide Bile, kana kooban xubno ka soo jeeda jufadiisa (Muuse Fiin, Habar Cafaan), ayaa weerar laxaadle ku qaaday guriga uu degan yahay Muumin Gadiid Cumar, oo dhawaan cod aqlabiyada ah ay xidhibaanada golaha deegaanka Boorama ugu doorteen inuu noqdo maayarka degmada Boorama, ka dib markii Cabdi Shide lagu eedeeyay inuu hormood ka ahaa musuqmaasuqa ku baahay maaulka degmada Boorama.
Cabdi Shide Bile, ayaa sida wararku sheegayaan samaystay maleeshiyo beeleedkan si ay u ilaaliyaan maadaama oo uu hada yahay nin calaamadaysan oo dambiile ah, waxaanay sida la sheegay maleeshiyadani ka difaacaysaa in si kadis ah ciidamada amnigu ama cid kaleba u qabtaan. Sidoo kale ayaa waxay maleeshiyo beeleedkani ka difaacayaan shacabka magaalada ee uu lacagtoodii cunay iyo cid kasta oo isku dayda inay waxyeeloo u geysata.
Weerarka maleeshiyo beeleedka Cabdi Shide ku qaaday guriga Muumin Gadiid Cumar, ayaa sida la sheegay ka dambeeyay wada tashi dhexmaray Cabdiraxmaan Saylici iyo taageerayaasha Cabdi Shide. Sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo u dhuun daloola labada dhinac ee maayarka Boorama isku haya, Saylici ayaa amar ku siiyay Cabdi Shide Bile inuu ka hawl galo sidii uu Muumin Gadiid Cumar guriga uu ku jiro uga saari lahaa, isaga oo adeegsanaya mulkiilaha guriga oo ah nin Bahabar Celi ah oo ku xidhan Saylici.
Muumin Gadiid Cumar iyo qoyskiisa, ayaa ka war helay qorshaha ay Cabdi Shide iyo Saylici u soo wadaan, ka dibna difaac adag ka galay gurigiisa si ay iskaga caabiyaan maleeshiyo beeleedka Muuse Fiin ee weerarka ah. Dagaalka ay soo qaadeen maleeshida Cabdi Shide Bile, ayaa sida la sheegay socday mudo saacado ah, waxaana la sheegay inay ku dhaawacmeen dad aan tiradooda la sheegin oo ka kooban labada dhinacba.
Wararka la xidhiidha weerarka maleeshiyada Cabdi Shibe Bile ku soo qaadeen guriga Muumin Gadiid Cumar, ayaa sheegaya inay ilaa 12 qof oo u badan Muuse Fiin hada bilaysku Boorama gacanta ku hayaan, kuwaas oo ku xidhan saldhiga galbeeka Boorama. Bilayska Boorama, ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan dadka xidhan iyo goorta la sii dayn doono iyo hadii maxakamad la keeni doonoo.
Dhinaca Kale, kiiska musuqmaasuqa ah ee lagu haysto Cabdi Shide Bile, ayaa wiigagii u dambeeyay sii karaar qaatay ka dib markii hanti dhawrka baadhaya soo saareen lacago dheeraad ah oo ka badan intii markii hore lagu eedeeyay. Lacagaha hada loo haysto Cabdi Shide Bile, ayaa sida la sheegay kor u dhaafay $200,000 (Labo Boqol oo Kun oo Doolar).
Kiiska Maayarkii hore Cabdi Shide Bile, ayaa hada cid walbaaba quus ka taagan tahay, iyada oo uu dhaafay heerkii laga badbaadin kari lahaa, inkasta oo xukuumada Siilaanyo iyo beeshiisuba aanay waxba la hadhin sidii uu xadhig uga fakan lahaa. Hanti Dhawrka Qaranka ayaa Cabdi Shide Bile ku noqday qalad loo soo diray, waxaana la sheegayaa inay wacad ku ku mareen inay jeel ku hubsadaan ama shaqada ka tagaan.
Warar aan la xaqiijin, ayaa sheegaya in baadhista Hanti Dhawrka Qaranka ay ka dambeeyaan ha’adaha caalamiga ah, sida UNDP-da iyo Deeq Bixiyayaasha caawiya Somaliland, sidaa darteedna ay adagtay in xukuumada Siilaanyo is hortaagto baadhitaanka Hanti Dhawrka Qarabka. Wararkan ayaa waxay intaa ku dareen in deeqaha Somaliland la siiyo lagu xidhay in la yareeyo musuqmaasaqa baahsan ee ka muuqda maamulka Somaliland, waxaana lagu amray in ugu horeyn la nadiifiyo dawlaha hoose.
Sidii awalba Somaliland caadada u ahayd in wax kasta oo la tijaabinayo laga soo bilaabo Boorama, ayaa maanata baadhitaankii hanti dhawrka ee u horeeyay ee dawladaha hoose waxa laga soo bilaabay Boorama. Waana taa ayay wararku sheegaqyaan ta Cabdi Shide Bile ku noqotay caqabad aanu ka gudbi karin, xukuumada iyo wasiir Geedoolana waxba ugu qaban kari laayihiin.
Cabdi Shide Bile, ayaa labadii casho ee u dambeeyay Hargeysa ku maqan, halkaasi oo sida muuqata ay “Kabihii Kaga Dhamaadeen”, iyada oo dhinaca kalena la saadaalinyo in dhawaan la xidhi doono. Hase yeeshee waxa taa burinya isaga oo dhawr jeer oo hore la yidhi waa la xidhayaa, welina dibedda jooga.
Ergo ka kooban 13 oday oo Bahabar Celi ah, kana kala yimid daafaha gobolka Awdal, ayaa sida la sheegay ku sugan magaalada Hargeysa, waxaanay sida la sheegay Saylici ugu tageen inay ka waaniyaan taageerada xaddhaafka ah ee uu ilaa hada la dabo taagan yahay Cabdi Shide Bile. Ergada Bahabar Celi, ayaa waxa kale oo ay Saylici ugu tegeen inay ka dhaadhiciyaan in Muumin Gadiid Cumar maanta yahay nin haysta taageerada badiba shacbka reer Awdal, sidaa darteedna aanu u daymo la’aanin.
Si kasta ha ahaate, maleeshiyada Muuse Fiin ee uu Cabdi Shide Bile adeegsanayo, ayaa wax weyn ka bedlai doonta Gobolka Awdal. Waa Markii u horeysay ee siyaasi ka soo jeeda gobolka Awdal samaysto maleeshiyo isaga u gaar ah, siduu doonana ugu adeegto, waxaana lama huraan ah in siyaasiinta gobolku iyo shakhsiyaad kaleba kaga daydaan ficilkan ugubka ku ah gobolka, taasi oo khatar gelin karta amaanka iyo xasiloonida shacabka.
Daawo Ra'yiga Qaar Ka Mid Shacabka Reer Boorama Ku Cabirayaan Dareenka ay Ka Qabaan Ururada Soo Baxay Iyo Kuwa Hadhay A Dumb Ignorance in the Debates of Ahmed Ismail Samatar + Faisal Ali Warabe: Somaliland and Somalia Never existed as parallel States.